Isihlahla sesithelo sezithelo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | March 2020
Isigaba Isihlahla sesithelo sezithelo
Uke wezwa nge-pey Chizhov? Futhi mhlawumbe uye wajabulela ukunambitheka kwawo okunomsoco futhi unesifiso sokutshala umuthi onjalo endlini yakho? Esihlokweni sethu sizocabangela konke okudingekayo kulokhu. Incazelo yezithelo (izinzuzo, ukungalungi) Chizhovskaya eliphakathi kwe-hybrid, elibanjwe abalimi baseRussia, olutholakala ngokuwela izinhlobo ezimbili ezinhle.
I-Pear Lada Wonke umuntu ubheke phambili ukushicilela, ehlobo, ukuba ajabulele hhayi kuphela ukushisa nezinsuku ezinhle, kodwa nokudla ngezipho zemvelo. Yiqiniso, wonke umuntu ufuna ukunambitha ngokushesha uhlobo oluthandayo lwezithelo nabalimi bezobuchwepheshe, futhi abalimi be-amateur bavame ukuthola isivuno sokuqala. Kwakungenhloso enjalo ukuthi i-Lada pear ezihlukahlukene zivele kungekudala.
Namuhla, ngenxa yentuthuko esebenzayo yokuzalanisa, izakhamuzi eziningi ezintsha zezitshalo zezolimo zivela. Ngokuba indalo yabo isebenzisa izinhlobo ezivela ngaphambilini. Izinhlobo ezintsha zithuthukisa ukunambitheka, ngcono ukulwa nezifo ezihlukahlukene. Enye yalezi zinhlobonhlobo eziyisisekelo yi-pear "i-Bergamot".
Pear Talgar ubuhle
Umuntu wanamuhla, okhathalela impilo yakhe, kufanele akhethe ukudla okunomsoco. Amapheya adinga ukufakwa ekudleni kwakho ngenxa yokutholakala kwezakhi eziningi eziwusizo emaspini nasesikhumba salezi zithelo. Kunezinhlobonhlobo eziningi zalesi sitshalo sesithelo, kodwa omunye wabamele abavelele kakhulu namanje i-Talgar Beauty ehlukahlukene.
Kuyaziwa ukuthi ukudla okunempilo kuyingxenye "yesisekelo" sempilo yabantu. Ingxenye ebalulekile yokuphila okunempilo ukusetshenziswa kwezithelo nemifino. Kuvela kulokudla umuntu athola izinto ezibizwa ngokuthi amavithamini. Ihlobo yisikhathi esihle kakhulu sokuvuna nokuvuthwa kwezithelo zemithi ehlukahlukene kanye nezihlahla.
I-Pear Forest Uhle
Lapho kuqala ihlobo, abantu abanemizwa emihle kuphela, kodwa futhi banethuba lokudla izithelo nemifino. Uma unayo ingadi yakho noma i-dacha, khona-ke kukhona ithuba lokukhula lezi zithelo kanye nemifino ngokwakho. Namuhla, ungakhula noma yini: kusuka kuma-apula nama-peyimu kuma-oranges.
Namuhla, noma ubani ofuna ukudala ingadi yakhe ayidingi ulwazi olukhethekile namakhono. Phela, ngokunakekelwa kahle, cishe bonke abamele izitshalo zasensimu bakhiqiza isitshalo esihle nesisimeme. Izinhlobo eziningi zemithi yezithelo zingakhula esimweni sethu sezulu. Ngisho nommeleli onjalo "ongasenyakatho" njengo-Pearl Ussuri uyakwazi ukugxila emasimini ethu.
I-Pear Memory Yakovlev
Noma yimuphi umuntu ojabulela ukulimala uzama ukwandisa inani lezilimo "ezihlala" ezweni lakhe. Ngakho-ke, isithakazelo emithini yezithelo siyakhula njalo. Manje, cishe kuzo zonke izindawo zikhula izinhlobo ezahlukene zezihlahla ze-apula, ama-plums, amapheya, ama-cherries nezinye izitshalo nezitshalo zeberry.
Iphakathi kweMaria nje
Bambalwa abantu abajabuli ngehlobo, ilanga, izithelo nemifino esisha. Phela, kusukela ebuntwaneni, ngamunye wethu watshelwa ukuthi izithelo zezolimo ziwusizo kakhulu emzimbeni wethu. Isithelo ngasinye noma imifino iqukethe isethi yayo yamavithamini namaminerali. Ngakho-ke, ukuze kutholakale ngokugcwele umzimba ngemva kokubanda ebusika kanye ne-avitaminosis, udinga ukwethula le mikhiqizo ekudleni kwakho.